Xisbi siyaasadeed ayaan ka mid ahay | Vaikuttajan reittikartta
Xisbi siyaasadeed ayaan ka mid ahay
Xisbiyadaha siyaasada waxay isu keenaan dadka ka siman aaraahda iyo fikradaha. Badanaaba waxay sahlan tahay in aad fariintaada aad kaga gudbiso kuwa go’aanka gaara ee ugu muhiimsan adiga oo u mara xisbi siyaasadeed. Xisbi kasta wuxuu leeyahay wax kaga duwan kuwa kale ay codbixiyayaasha u hayaan marka laga hadlayo aaraahda iyo fikradaha.
Hadda waxaa dalka Finland ka diiwan-gashan 14 xisbi siyaasadeed. Sideed ka mid ah kuwan waa xisbiyo baarlamaan, kaasoo micnaheedu yahay in ay heleen codad ku filan oo ay ku yeeshaan wakiilo Baarlamaanka ugu matala.
Taa waxaa raacsan xisbiyo siyaasadeed, sidoo kale waxaa jira ururo arday iyo ururo dhalin yar siyaasadeed. Waxaa jira ururo kuwaas oo loogu tala galey dadka dhalin-yarta aragti mideysan sida xisbi siyaasadeed.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xisbiyadaha siyaasada iyo ururada dhalin-yarta ama dadka da’da yar ayaa waxaad ka heli kartaa boggaga internetka ee Iskuulka Webka ee Dhalashada Firfircoon (Valtikka).